Search teenage mutant ninja turtles - Online
10 အဘို့ရလဒ် teenage mutant ninja turtles
အပြေးစဉ်တတ်နိုင်သမျှအများအပြားဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်းရန် ninjago ကိုကူညီပါ။
ကျနော်တို့တစ်ဦးအေးမြပြိုင်ကားဂိမ်းနှင့်အတူပြန်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီတစျသငျသညျကိုအကောင်းဆုံးကားဒရိုင်ဘာနေ, တစ်ဦးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရှုခင်းနှင့်အတူဖြစ်သနည်း
သင်တစ်ဦးအလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်ရန်ဖြောင့်ငရဲမှဝင်ကြပြီ။ သင့်ရဲ့လက်နက်ပစ်နှင့်ဖုတ်ကောင်များ၏ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရ။ အဆိုပါပိုပြီးသင်ရပိုပြီးမှတ်ကိုသတ်။ သူတို့၏အားနည်းအမှတ်အ HEAD သည်ကိုသတိရပါ။ ထိုသေနတ်အားသွင်းရန်သင့်မောက်စ်နဲ့ space bar ကိုသုံးပါ။
အိုးကွီးစှာသောပြိုင်ကား! ဘယ်လိုအံ့သြဖွယ်! SpongeBob ယခုသူကားမောင်းမှာမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏တစ် trip.But အဘို့အသွားကိုယ်အဘို့ရထားဘီး၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဝယ်ယူကြသနည်းသူဟာအမြဲသင့်ကိုငါကလုပျနိုငျသိ down.But ကိုချိုးဖျက်! ရုံကြိုးစားကြည့်ပါ!
, သင့်ပြီးခဲ့သည့်ရပ်အပေါ် Wolverine အဖြစ် Play ရန်သူလှိုင်းတံပိုးမှတဆင့်စစ်တိုက်, Wolverine တက်အသီးအသီးအခက်အခဲနှင့်အာဏာသူဌေးကချယူ, လမ်းတစ်လျှောက်အောင်မြင်မှုများဝင်ငွေ!
အလှည့်-based တိုက်စစ်အတွက် baddies စစ်တိုက်ခြင်းမှဇာတ်ကောင်သင့်ရဲ့အဖွဲ့လှေတစ်ခု 18MB RPG ။